Tabilao forklift an'i China ho an'ny orinasa mpamokatra mpamokatra Linde sy BYD China OEM | Hywg
Inona ny sisin'ny forklift?
ny forklift rim dia asselmbled miaraka amin'ny kodiarana mba handray lanjan'ny fiara ary mihodina haingana amin'ny toe-javatra samihafa. Tabilao forklift dia manakiana ny androm-piainan'ny forklift ary ny fahombiazan'ny fiasa, tsara forklift rim afaka mitondra lanja mavesatra ary manampy ny forklift mihodina milamina sy mahomby. Tena zava-dehibe ho an'ny forklift ny manana matanjaka, azo antoka ary mora apetakaforklift rim. Ny vokatray HYWGforklift rim safidy tsara ho an'ny tompona forklift satria noporofoinay ny kalitao, ny vidiny tsara ary ny sisin'ny forklift feno ho an'ny ankamaroan'ny marika. Izahay dia mpanamboatra sisin'ny OEM ho an'ny anarana be toa an'i Linde sy BYD.
Firy amin'ny karazana rim forklift?
Misy karazany maro ny forklift rims, voafaritry ny rafitra dia azo zaraina roa, 2-PC, 3-PC ary 4-PC. Ny sisin'ny sisiny dia kely sy maivana ary ampiasain'ny forklift kely, ny sisin'ny 2-PC dia mora apetraka, ny 3-PC ary ny 4-PC dia ampiasain'ny forklift afovoany sy lehibe, afaka mitondra entana mavesatra sy hafainganam-pandeha izy ireo. Ireo forklift herinaratra dia mazàna mampiasa sisin'ny 3-PC sy 4-PC satria mitovy ny habeany dia mahazaka enta-mavesatra kokoa ny sisiny ary mihazakazaka mangina kokoa izy ireo noho ireo karazana rim hafa.
Inona no ampiasaina amin'ny sisin'ny forklift?
NY forklift rim azo ampiasaina amin'ny marika isan-karazany toy ny:
Haben'ny Rim Karazana faribolana Haben'ny kodiarana Modely milina
3.00D-8 Saraho 5.00-8 Linde, Toyota, Nissan
4.33R-8 Saraho 16x6-8 Linde, Toyota, Nissan
4.00E-9 Saraho 6.00-9 Linde, Toyota, Nissan
5.00F-10 Saraho 6.50-10 Linde, Toyota, Nissan
5.00S-12 Saraho 7.00-12 Linde, Toyota, Nissan
Ny tombotsoantsika amin'ny forklift rim?
(1) Tsy afaka manome ihany isika forklift rim feno nefa koa forklift rim singa toy ny kavina hidy, peratra sisiny, flanges ary seza vakana.
(2) Ny tombony ananantsika dia ny fananantsika ny vy fikosoham-bary izay mamokatra kojakoja mifono vy toy ny peratra hidin-trano, flange, peratra sisiny, seza bead 100% irery, manolotra kalitao avo lenta sy vidiny mirary izahay.
(3) Manana karazana forklift rim anisan'izany ny sisin'ny indostria, ny sisin'ny 2-pc, ny sisin'ny 3-PC ary ny sisin'ny 4-PC, azontsika atao ny manome ny karazana rim forklift.
(4) Ny kalitaonay dia voaporofon'ny OEM lehibe toa an'i Linde, BYD ary mpamokatra forklift hafa.
Teo aloha: Fitrandrahana harena ankibon'ny tany Sinoa OEM mpanamboatra haben'ny 33 ″ ka hatramin'ny 63 ″
Manaraka: Tabilao indostrialy ho an'ny mpamorona China mpamokatra Tele finday Boom